မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ KNU ဥက္ကဌမူတူးစေးဖိုးရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် တဦးထဲရဲ့သဘောထားသာဖြစ်တယ်လို့ဆို - CeleHits
မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ KNU ဥက္ကဌမူတူးစေးဖိုးရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် တဦးထဲရဲ့သဘောထားသာဖြစ်တယ်လို့ဆို
May 11, 2021 by CeleHits
KNU ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမှုတူးစေးဖိုး ၏သဘောထား သာ
#၂၀၀၈ ခြေဥကို အသက်ပြန်သွင်းနေသလိုဖြစ်မနေဘူးလာ စဉ်းစားကြပေါ့
NCA မူဘောင်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် KNU ဥက္ကဋ္ဌတိုက်တွန်း
သက်ဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့များအနေဖြင့် အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA မူဘောင်များအတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပါရန် တိုက်တွန်းကြောင်း KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ယနေ့ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် သဘောထားထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအနေဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ မူဘောင်များအား လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်သူအားလုံးအနေဖြင့်လည်း အပစ်ရပ်စာချုပ် NCA မူဘောင်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာကျင့်သုံးလျက် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပါရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်းကြောင်း” ဟု KNU ဥက္ကဋ္ဌ၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြောဆိုထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ အချိန်အခါ အခြေအနေတစ်ခုတွင် နိုင်ငံရေးပြဿနာကို လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပန်းလာသည်ကို ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့မြင်နေရသဖြင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာအား နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကောင်းဖြစ်သည့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းသာ အဖြေရှာရန် သဘောထားရှိသည်ဟုလည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဆက်ပြောသည်။
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးသည် ဦဒသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်နေ့တွင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသည်း (၈) ဖွဲ့နှင့်အတူ တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် NCA ကို လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
ယခု သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်သည် KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး၏ သဘောထားသာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့အစည်းထုတ်ပြန်ချက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း မဟုတ်သလို KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ အားလုံး၏ သဘောထားရပ်တည်ချက်မဟုတ်ကြောင်းKNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
မေန့က ထုတ်ျပန္လိုက္တဲ့ KNU ဥက္ကဌမူတူးစေးဖိုးရဲ့သေဘာထားထုတ်ျပန္ခ်က် တဦးထဲရဲ့သေဘာထားသျာဖစ္တယ္လို့ဆို
#KNU ဗိုလ္ခ်ုပ်ကြီး စောမှုတူးစေးဖိုး ၏သေဘာထား သာ
#၂၀၀၈ျေခဥကို အသက်ျပန်သြင်းနေသလျိုဖစ္မေနဘူးလာ စဉ်းစားကြေပါ့
NCA မူဘောင္မ်ားအတိုင်း တိက်စြာလိုက္နာက်င့်သုံးပြီး ငြိမ်းခ်မ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် KNU ဥက္ကဋ္ဌတိုက္တြန်း
သက္ဆိုင်ရာ အစုအဖြဲ့မ်ားအေနျဖင့် အပစ်ရပ္စာခ်ုပ် NCA မူဘောင္မ်ားအတိုင်း တိက်စြာ လိုက္နာက်င့်သုံးပြီး ငြိမ်းခ်မ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပါရန် တိုက္တြန်းကြောင်း KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ္ခ်ုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးက ယေန့ မေလ (၁၀) ရက်နေ့တြင် သေဘာထားထုတ်ျပန်ျေပာဆိုလိုက်ကြောင်း သတင်းရရွိသည်။
“KNU ကရင်အမ်ိုးသားအစည်းအရုံးအေနျဖင့် တြေ့ဆုံဆြေးနြေျးခင်း၊ မူဘောင္မ်ားအား လိုက္နာက်င့်သုံျးခင်းကို ဆက္လက်ဆောင်ရက်ြသြားမည်ျဖစ်ပြီး သက္ဆိုင်သူအားလုံးအေနျဖင့္လည်း အပစ်ရပ္စာခ်ုပ် NCA မူဘောင္မ်ားအတိုင်း တိက်စြာလိုက္နာက်င့်သုံးလ်က် ငြိမ်းခ်မ်းရေးကို ထိန်းသိမ်းကြပါရန် အေလးအနက္တိုက္တြန်းကြောင်း” ဟု KNU ဥက္ကဋ္ဌ၏ သေဘာထားထုတ်ျပန္ခ်က္တြင်ျေပာဆိုထားသည်။
၂၀၂၁ ခုနွစ္တြင်ျမန္မာနိုင်ငံ​၏ နိုင်ငံရေးအျေပာင်းအလဲ အခ်ိန်အခါ အျေခအေနတစ္ခုတြင် နိုင်ငံရေျးပဿနာကို လက္နက္ကိုင္နည်းလမ်ျးဖင့်ျေဖရွင်းရန် ကြိုးပန်းလာသည္ကို ဝမ်းနည်းဖြယ် တြျေ့မင်နေရသျဖင့် နိုင်ငံရေျးပဿနာအား နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကောင်ျးဖစ်သည့် တြေ့ဆုံဆြေးနြေျးခင်းသာ အျေဖရွာရန် သေဘာထားရွိသည်ဟုလည်း KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဆက်ျေပာသည်။
KNU ကရင်အမ်ိုးသားအစည်းအရုံးသည် ဦဒသိန်းစိန် အစိုးရလက္ထက် ၂၀၁၅ ခုနွစ်၊ အောက္တိုဘာ (၁၅) ရက်နေ့တြင် အျခားသော တိုင်းရင်းသား လက္နက္ကိုင်အဖြဲ့အသည်း (၈) ဖြဲ့နွင့်အတူ တစ္နိုင်ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မှု ရပ္စဲရေး သေဘာတူစာခ်ုပ် NCA ကို လက္မွတ်ရေးထိုးထားသည်။
ယခု သေဘာထားထုတ်ျပန္ခ်က်သည် KNU ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ္ခ်ုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး၏ သေဘာထားသျာဖစ်ပြီး အဖြဲ့အစည်းထုတ်ျပန္ခ်က် လုပ္ထုံးလုပ္နည်းအတိုင်း မဟုတ်သလို KNU ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင္မ်ား အားလုံး​၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မဟုတ်ကြောင်းKNU ထိပ္ပိုင်းခေါင်းဆောင္မ်ားနွင့် နီးစပ်သူမ်ားကျေပာသည်။
ပုခုံးပေါ်သုံးပွင့်တင်ထားတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်က ဆက်ကြည့်နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး? အခုလိုဘဝနဲ့ရင်းပြီး
လက်ရှိအချိန်ြ မန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ဘယ်လောက်တောင် ကျဆင်းနေပြီလဲ…. ( ပိုက်ဆံ သိန်း 100 ပိုင်တဲ့လူဟာ အခုဆိုရင် သိန်း 80 ဖိုးလောက်ပဲ တန်ဖိုး …ရှိတော့တာလား…?)